Thwebula WinContig 3.0.0.1 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: WinContig
I-WinContig – isofthiwe yokuhlukumeza amafayela namafolda ngabanye ngaphandle kokusebenzisa le nqubo kuyo yonke i-disk eyinkimbinkimbi. Isofthiwe ikudinga ukuba ungeze noma uthuthele amafayela ewindini elikhulu bese uqala ukudideka. Ngaphambi kokuqala ukuhlukumezeka, i-WinContig ithumela isicelo sokuhlola i-disk namafayela amaphutha okusiza ukunciphisa amaphutha ngenkathi kuncike ekunciphiseni. Isofthiwe ivumela ukufaka noma ukukhipha amafayela athile noma amafomethi wefayela kusuka ekukhunjweni futhi ulondoloze isethi yamafayela kuphrofayela ukuze kube lula ukusebenzisa kabusha. I-WinContig ingenza ngokuzenzakalelayo imisebenzi ehleliwe iphinde iphathe imingcele ehlukahlukene ngokusebenzisa umugqa womyalo owenza kakhulu ukuhamba komsebenzi. Futhi i-WinContig ingakopishwa kumphathi wezindaba ophathekayo, isibonelo, idrayivu yegesi futhi isetshenziselwa izintandokazi zakho kunoma iyiphi ikhompyutha.
Amafayela akhethiwe ahlukumeza
Ukuqoqwa kwamafayela kuphrofayela yakho
Ukuphathwa kwecebo lokuhlukunyezwa
Amazwana ku WinContig
WinContig software ehlobene
IFiles Unlocker yamahhala – isoftware yakhelwe ukuvula amafayela aphendula ngephutha kumzamo womsebenzisi wokuwasusa, ukukopisha, ukuyiqamba kabusha noma ukuwahambisa.
I-ArtMoney – isoftware yakhelwe ukuhlela amanani we-in-game afana nenani lezimpilo, inani lezinhlamvu, imali noma amaphuzu. Isoftware isebenza kahle kuphela ngemidlalo yesidlali esisodwa.